मनाङ मस्र्याङदीको भाग्य पेनाल्टीमा, बन्यो छैटौं पटक १८ औं आहा ! रारा गोल्ड कपको विजेता – Online Annapurna
मनाङ मस्र्याङदीको भाग्य पेनाल्टीमा, बन्यो छैटौं पटक १८ औं आहा ! रारा गोल्ड कपको विजेता
१ चैत्र २०७६, शनिबार १४:०३ March 14, 2020 108 Views
अनलाइनअन्नपूर्ण/चैत्र ०१, पोखरा
मनाङ मस्र्याङदी क्लव वर्ष २०७६ को १८ औं आहा ! रारा गोल्ड कप २०७६ को उपाधि आफ्नो काबुमा लिन सफल भएको छ ।
नेपाल पुलीस क्लवलाई पेनाल्टी सुटमा ४-३ ले पराजित गर्दै मनाङले क्याराभान गोल्ड कपसहित ६ पटकको विजेता नेपाल पुलीससंग जितको संख्या बराबरी ६ पुर्याएको छ ।
निर्धारीत समयसम्म काउन्टर अट्याकिङको खेल खेलेका दुवै टीमले गोल गर्न नसकेपछि खेल अतिरीक्त समयमा खेलाईएको थियो । ३० मिनेटको अतिरीक्त समयमा पनि दुवै टोलीले ५०/५० को खेल खेले भने दुवैका कैयन प्रहारहरु खेर गएका थिए ।
अपरान्हसंगै वादलले ढपक्क ढाकेको आकाश, चीसो सिरेटोसंगै पोखरा रंगशालामा पेनाल्टी सुटमा पुगेको खेलमा मनाङ ४-३ ले विजयी भयो भने नेपाल पुसिलको सातौं पटकको उपाधि जित्ने सपना अधूरै रह्यो ।
रंगशालाका चारै पट्टिका प्याराफिटमा फाईनल खेल भएर होला मनाङका दर्शकहरु मनाङको झण्डा लिएर हुटिङ गरिरहेका थिए । खेल सकिए लगत्तै मनाङका खेलाडीहरुले प्याराफिटको चारैतिर घुम्दै दर्शकलाई अभिवादन गर्दै खुसियाली मनाएका थिए ।
जीतको खुसियाली मनाउन दिलाउने गोल गर्ने मनाङका खेलाडीहरु अन्जन विष्ट, पुजन उपरकोटी, सुरज विके र रन्जन विष्ट हुन । पुलीसको तर्फबाट भोला सिलवाल, हेम तामाङ र वुद्ध वलले गोल गरेका थिए भने अजित भण्डारी र तेज तामाङले गरेको प्रहारलाई मनाङका गोल रक्षक अशोक वरालले रोकेका थिए ।
विजेता मनाङले १० लाख १ जहार, मेडल तथा ट्रफि प्राप्त गरको छ भने उपविजेता नेपाल पुलिसले ५ लाख १ हजार, मेडल तथा ट्रफि प्राप्त गरेको छ ।
समापन समारोहमा क्लवका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले विशेष परिस्थितिमा पनि दर्शक, प्रदेश तथा स्थानिय सरकार, संचार क्षेत्र, व्यवसायी, प्रायोजक र खेलप्रेमीको सहयोगले प्रतियोगिता राम्रोसंग सम्पन्न गर्न पाएकोमा सहयोगि सबैलाई आभार व्यक्त गर्नुभयो ।photo:sudarshan ranjit